Abakhulelwa go eKZN - Umbiko | isiZulu
Abakhulelwa go eKZN - Umbiko
Imibiko ehambelanayo Kuwumsebenzi omkhulu ukukhulelwa kwabafundi
Bathi ibhokile iSatanism - Umbono
Zidlangile izigameko zocansi entsheni e-E Cape
Johannesburg - Izehlakalo zamantombazane afunda isikole kwaZulu-Natal akhulelwa ngonyaka owedlule zafika ku-13 000 nokuyisibalo esiphezulu uma kuqhathaniswa neminye iminyaka, kubika iphephandaba iDaily News, ngoLwesine.
Umbiko uthe isikhulu soMnyango wezeMfundo uGugu Mdladla uthe ngonyaka ka-2010, isibalo sezingane ezakhulelwa sabe siku-12 971. Iphephandaba lithi licaphune uNgqongqoshe woMnyango uSenzo Mchunu ethi kumanje balinganiselwa ku-465 abafundi abakhulelwe.
– Landela IzindabaNews24 kuTwitter (@IzindabaNews24). E-maila umbiko
Indoda yaKwaZulu-Natal ikanye nomama wayo basejele, kulandela ukulahlwa ngamacala okubamba inkunzi kanye nokuphazamisa ukusebenza komthetho.
Isikhulu soKlebe kwelokukhwabanisa
Ivele ngaphambi kweNkantolo yesiFunda eNelspruit, inhloko yophiko loKlebe eMpumalanga, njengoba ibhekene namacala enkohlakalo, kusho amaphoyisa. Kudedelwe umbiko ngolwakwaGupta
Udedeliwe umbiko ophelele ngodaba olungundabamlonyeni lokuhlaliswa kwendiza yakwaGupta, enkambini iWaterkloof Air Force Base.